सोमबारदेखि इपिएल,को को छन् टिममा ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ३ पुष २०७४, सोमबार ०५:२५ |
काठमाडौं । सबैभन्दा धेरै पुरस्कार राशीको घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । प्रतियोगिताका खेल कीर्तिपुरमा रहेको क्रिकेट मैदानमा हुनेछन् । पुस ११ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा काठमाडौ किंग्स इलेभेन र ललितपुर प्याट्रिओट्स, विराटनगर वारियर्स, चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोज र भैरहवा ग्लाडिएटर्स खेल्नेछन् ।
उद्घाटन खेलमा सोमबार काठमाडौ किंग्स इलेभेन र ललितपुर प्याट्रिएट्स खेल्नेछन् । प्रतियोगिताको विजेताले २१ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ । तर दोश्रो हुने टिमले कति पुरस्कार पाउँछ भन्ने अझैसम्म खुलाइएको छैन । खेल हेर्न साधारण दर्शकको लागि १०० रुपैयाँ र विद्यार्थीलाई ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
भारत पाकिस्तान श्रीलंका र हङकङ्गका खेलाडीले पनि खेल्ने
तीनजनासम्म विदेशी खेलाडी राख्न पाउने नियम अनुसार इपिएलमा सहभागिमध्ये ५ टीमले टिमले विदेशी खेलाडीलाई पनि अनुबन्ध गरेका छन् । जसमा भारतीय, पाकिस्तानी, श्रीलंकाली र हङकङ्गका खेलाडी रहेका छन् ।
काठमाडौं किङ्स इलाभेनले श्रीलंकाली खेलाडीलाई प्राथमिकता दिएको छ । उसले कप्तानको जिम्मेवारी नै श्रीलंकाका फरवेज महरुफलाई दिएको छ । उनी श्रीलंकाको राष्ट्रिय टिमबाट एकदिवसीय र टेष्ट क्रिकेट समेत खेलिसकेका खेलाडी हुन् । यो टीममा श्रीलंकाका अक्षय फर्नाण्डो पनि अनुबन्ध रहेका छन् ।
ललितपुर प्याट्रिओट्सले भारतीय खेलाडीलाई मौका दिएको छ । ललितपुरबाट भारतका योगेश नायर सुबोध भाटी र जयकिसन कोल्सावालाले खेल्नेछन् ।
विराटनगरले हङकङ्गका खेलाडीलाई क्लवमा अनुबन्ध गरेको छ । हङकङ्गका कप्तान बाबर हायथ र अंशुमन रथले विराटनगर वारियर्सबाट खेल्नेछन् ।
चितवनले भारतका सावेज खान र प्रविन गुप्तालाई अनुबन्ध गरेको छ । त्यस्तै पोखराले पाकिस्तानका आशिफ अलि, ताज वाली र असरुल्लाहलाई अनुबन्ध गरेको छ ।
को को छन् टिममा
फरबेज मेहरुफ –कप्तान)
शरद भेषावकर (कप्तान)
पृथु बास्कोटा (कप्तान)
Previousयस्तो रहेछ नायिका नम्रता श्रेष्ठको सौन्दर्यको राज !
Nextमेलबर्न सप्ताहको शुभारम्भमा मेलबर्नमा भव्य कलश यात्रा
अष्ट्रेलियालाई भारतले २६ रनले हरायो
२ आश्विन २०७४, सोमबार १३:४७